AK/Prabhupada 0034 - Obiara nya nimdeɛ fi okunini bi nkɛn - Vanipedia
AK/Prabhupada 0034 - Obiara nya nimdeɛ fi okunini bi nkɛn
Ti Nson, "Awurade ho Nimdeɛ ." Nneɛma abien wɔ ha, nea edimu ɛne nea enni mu. Wiase yi enni mu. Ha yi, yɛrentumi nte ade biako ase gyesɛ ne yɔnko baako bio ka ho Sɛ yɛka se "Ɔba ni a", "na ɛsɛ sɛ agya nso wɔ hɔ." Sɛ yɛka se "okunu ni a", "na ɛsɛsɛ sɛ ɔyere nso wɔ hɔ." Sɛ yɛka se "akoa ni a'" "na owura wɔ hɔ." Sɛ yɛka se "kanea ni," "na esum wɔ hɔ." Wɔfrɛ eyi se wiase a enni mu. Sɛ wobɛte biako ase a na baako nso ka ho. Nanso, ewiase foforo bi nso wɔ hɔ, saa ewiase yi de edi mu. Ɛhɔ de, owura ne akoa yɛ ade biako. Nsonsonoe enni mu. Ɔbaako yɛ owura na ɔbaako nso yɛ akoa, nanso wɔn debea yɛ baako.
Enti Bhagavad-gītā Eti ɛsɔn no kyerɛ biribi ɛfa wiase ɛne nimdeɛ a edi mu no ho. Sɛnea yebenya saa nimdeɛ no, Awurade Kṛṣṇa akyerɛ mu. Kṛṣṇa yɛ abɔde nyinaa Agya a odi mu.
Eyi ne nea Awurade Brahmā aka afa Kṛṣṇa ho wɔ ne nhoma kronkron Brahma-saṁhitā mu. Saa nhoma yi, Śrī Caitanya Mahāprabhu kɔgyei wɔ India anafo mantam. ɛna ɔdemaa n'asuafo bere a ofi n'aporɔw bɔ a ɛde no kɔɔ India anafo mantam bae no. Enti ye gye to mu sɛ saa Brahma-saṁhitā nhoma yi yɛ kronkron. Sɛnea yenya nimdeɛ eni. Yenya nimdeɛ efi nea ɔwɔ nimdeɛ nkyɛn. Obiara gye nimdeɛ fi nea onim hɔ, nanso eyi yɛ nimdeɛ a dodow no ara agye ato mu. na ɔkwan a yɛfa so nya nimdeɛ no sono kakra. Sɛ yegye nimdeɛ fi obi hɔ a na ɛkyerɛ sɛ ɔno nso agye nimdeɛ no afi ne wura nkyɛn Obiara mmɔ ne tirim. Ɛnnyɛ adwuma. Ɛyɛ saa a enni mu. Metaa de asɛm yi yɛ nfantoho, sɛ abɔfra sua ade fi n'agya nkyɛn. Abɔfra no bisa n'agya, "Agya, afiri bɛn ni?" na agya no abua se, "me dɔba, wɔfrɛ no akasamu." Enti, abɔfra no nya nimdeɛ fi n'agya nkyɛn, "Eyi yɛ akasamu." Enti, sɛ abɔfra no ka kyerɛ obi foforo se, "Eyi yɛ akasamu a, na ɛyɛ nokware. Ɔyɛ abɛfra de nanso, esiane sɛ w'anya nimdeɛ afi nea onim hɔ no nti, n'sɛm no yɛ nokware. Saa ara, sɛ ye sua ade fi nea onim nkyɛn a, ebia, meyɛ abofra nanso m'asɛm no yɛ nokware. Eyi ne kwan a yɛfaso nya nimdeɛ. Yemmɔ yɛn tirim nnya nimdeɛ. Saa kwan yi, w'akyerɛm wɔ Bhagavad-gītā eti anan no mu. evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Eyi ni paramparā akwankyerɛ no..
Evaṁ paramparā. Enti nimdeɛ a edi mu no, yenya efi nea odi mu nkyɛn. Obiara enfi ewiase a enni mu no mu mmɛ kyerɛ nimdeɛ a edi mu. Ɛnnyɛ yie. Enti aha yi yɛ te ewiase a edi mu no ase, nimdeɛ a edi mu,efi ade nyinaa so Tumfo, Ɔhotefo no nkyɛn. Edi mu a ɛkyerɛ sɛ anādir ādir govindaḥ (Bs. 5.1). Ɔne agya a n'akyi obiara enni hɔ, ɔno na ade nyinaa efi no, enti odi mu. Ɛnnyɛ obi na ɔbɔɔ no. Eyi ne Nyame. Enti saa eti yi, wɔkyerɛ mu sɛ, śrī bhagavān uvāca, Onipa a odi mu. Bhagavān kyerɛ sɛ Onipa a odi mu a ɔnfa n'ani nto obiara so.
Retrieved from "https://www.vanipedia.org/w/index.php?title=AK/Prabhupada_0034_-_Obiara_nya_nimdeɛ_fi_okunini_bi_nkɛn&oldid=336536"
AK-Quotes - in South Africa
This page was last modified on 8 June 2018, at 11:07.